ဖူးနုသစ်: ကြယ်ငါးပွင့် ဟိုတယ်ပေါ်မှာ (၁)
အခုလို အတွေ့အကြုံကို အသေးစိတ်ရေးပြတာ ကျေးဇူးပါ။ ဗဟုသုတလည်း ရပါတယ်။ ရပ်တည်ရေးအတွက် တဖက်တလမ်းက ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ရုန်းကန်ရင်း ပညာရှာနေကြတဲ့၊ ပညာရှာခဲ့ကြတဲ့ မြန်မာကျောင်းသားများကို လေးစားမိပါတယ်။
Read your post.... Really miss that working time during student life... I remember working for 20 hours continuously at Regent hotel banquet (got3hours to rest in between) during my 2nd year of Christmas in Singapore... But earned around 200 just for that day.... ha ha....
Singapore မှာကျောင်းတက်တုန်းက အဲလိုပဲလုပ်ဘူးတယ်
Memories of Grand Hyatt ....
Write more about OC, Buffet Cubes, etc....